PONT FITIM MAHAJANGA : Fifaninanana familiana niafara tamin’ny fahatapahan-tongotra
Mpitondra moto roa no somary nanakan-dalana mpitondra bajajy iray handeha any SOTEMA, ny sabotsy alina 8 febroary tamin’ny valo ora. 11 février 2020
Nampaneno anjomara ity farany hangataka lalana saingy tsy nanome ireo mpitondra moto. Nisongona ihany ilay mpitondra bajajy ka nenjehin’ireo mpandeha moto. Tonga teo alohaloha amin’ny garazy, eo amin’ny pont Fitim dia nosakanan’ireo mpitondra moto ilay mpitondra bajajy, araka ny fitantarany.
Nanontany ireo mpitondra moto hoe “mamo ve ianao ?” Dia namaly ilay mpamily bajajy hoe :’ izaho mangataka lalana tsy omenareo’. Niteny indray ireo roalahy hoe ‘tsy hainao moa fa izahay avocat ?’ dia nomen’izy ireo totohondry ka voa teo amin’ny masony ilay mpitondra bajajy. Nosintonin’izy ireo ny lakilen’ ny bajajy fa tsy nomen’ilay mpamily. Vory ny olona, nijery ny zava-misy ary nisy ramatoa nilaza tamin’ilay mpamily bajajy hiala dia niala teo izy.
Araka ny nambarany moa dia jemby izy nefa nentiny ihany ilay bajajy ka rehefa nitondra ilay bajajy alohaloha izy dia nilatsaka tamin’ny sisin-dalana ka nanitsy andrin-jiro… Niala tao ambony bajajy izy ka latsaka tany anaty hantsana ilay kodiaran-telo. Izy kosa nifatratra tamin’ilay andrin-jiro ka tapaka nitsoaka ny tongony havia. Nisy nitondra tany amin’ny hopitaly izy ka ny tany no niantso ny fianakaviany. Tonga teny amin’ny hopitaly ny havany nizaha azy ka gaga nahita ny tongony tapaka. Nandray an-tanana azy kosa ireo mpitsabo ka dia tapaka tanteraka ny tongony ankehitriny. Nametraka fitoriana moa ny havan’ilay naratra ary karohina kosa ireo olona niady taminy.